July 27, 2019 - ThutaStar
အိမ်မှာတော့ ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလိုက်…
July 27, 2019 Thuta Star 0
တုတ်ကွေး အခုချိန်ခါက တုတ်ကွေးရာသီလို့ပြောရမလား။ တော်တော်များများ ဖျားနေတာတွေ့ရတယ်။ အထူးသဖြင့် ကလေးတွေ ဖြစ်တာ ပိုများနေတယ်။ ပြီးတော့ တုတ်ကွေးဆိုတာ ဖြစ်လာမှ ဆေးကုတော့လည်း ချက်ချင်းမပျောက်တတ်ဘူးဗျ။ ဒါဆိုကြိုတင်ကာကွယ်လို့ ရနိုင်သလား? ဟုတ်ကဲ့ ရပါတယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတော့ ချက်စားနေတဲ့ဆန်ပုံးထဲမှာ ချင်း( ဂျင်း ) တက်လေးတစ်တက် ထည့်ထားလိုက်တာပါပဲ။ […]
၇၃နှစ် အဖိုးအို သမီးအရင်းရဲ့ ပြောစကားကြောင့် ကြိုးဆွဲချသွားရတဲ့အဖြစ်…
အသက်ကြီးလာတဲ့ လူကြီးတွေကို အိုပယ်လို့ ခေါ်ကြခြင်းမှာ လူငယ်တွေက ကိုယ်အမူအယာဖြင့်ဖြစ်စေ၊ နှုတ်အမူအယာဖြင့်ဖြစ်စေ သူတို့ကို ဖယ်ကျဉ်လာခြင်းကနေ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ စကားလုံးပါ။ ဒီကမ္ဘာလောကကြီးမှာ ငါတို့ ဘာမှ အရေးမပါတော့ပါလားဆိုတဲ့စိတ်က သူတို့ကို နာကျဉ်စေပါတယ်။သားတွေသမီးတွေကို သူတို့ ဘယ်လိုပဲ လုပ်ကျွေးခဲ့လုပ်ကျွေးခဲ့ အသက်ကြီးလာတဲ့အခါ ဆာနေရင်တောင် သားတွေသမီးတွေက ကျွေးမှ၊ စကားပြောချင်ရင်တောင် […]
ညကြီးအချိန်မတော် ကားပျက်လို့ဆိုပြီး တားလာသူမှာ စစ်ကားနဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်ဖြစ်နေသောအခါ..
လွိုင်လင်ကနေပြန်လာတုန်းကပေါ့ ဟိုပုန်းနားအရောက်မှာ ကုန်ကားတစ်စီး လမ်းမှာ ကိုယ်တွေကိုတားတယ်..! ညဘက်ကြီးဆိုတော့ ..တားတဲ့လူကလည်း လက်နှိပ်ဓါတ်မီးလေးနဲ့ပေါ့ ..!ကိုယ်တွေမောင်းတာ ..အရှိန်ကလဲများ ..ရပ်ဖို့ကလဲ အစီအစဉ်ကလဲမရှိတော့ မရပ်ဘဲ ဆက်မောင်းလိုက်တာပေါ့ …! ဒါနဲ့ မျက်လုံးထဲမှာ ဖျတ်ကနဲ ..မြင်လိုက်မိတာက စစ်ကားနဲ့ တပ်မတော်သားတစ်ယောက်..! ဒီလိုနဲ့ ..ဂီယာနဲ့ ဘရိတ်ကိုတွဲအုပ်လိုက်တော့ ..ဓါတ်တိုင်နှစ်ကိုအကွာရောက်မှ […]
ဦးပိန်တံတားအနီးက မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..
မင်္ဂလာပါ စာရှုသူတို့ခင်ဗျာ.. အခုတစ်ခါတင်ဆက်ပေးချင်တဲ့ သတင်းရုပ်သံဖိုင်လေးကတော့ မြန်မာတွေကို မရောင်းဘူးဆိုတဲ့ ဦးပိန်တံတားအနီးက “သာသုံးကြား” တရုတ် စားသောက်ဆိုင်..အကြောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်တာဝန်ခံက မြန်မာဖြစ်ပြီး၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကတော့ တရုတ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်မှာ တရုတ်အစားအစာသာ အဓိကထားရောင်းပြီး မြန်မာလူမျိုးတွေကို မရောင်ဘူးဆိုတဲ့အပေါ်မှာ တစ်စတစ်စ လူပြောများပြီး လူသိများသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆိုင်ဟာ တရုတ်နိုင်ငံတိုးရ် […]
ဆရာမင်းသိင်္ခ၏ 28.7.2019 မှ 3.8.2019 ထိ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း…
ဆရာ မင်းသိင်္ခရဲ့ 28.7.2019 မှ 3.8.2019 ထိ တပတ်စာ အခမဲ့ ဟောစာတမ်းကို ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်.. ဗေဒင် ဟောကိန်းများသည် ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ၏ ပညာအတိုင်း တွက်ချက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်.. မိမိ၏ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ အတွက်လည်း share ခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်သည်.. အောက်တွင် […]
သားဖြစ်သူက တရားရုံးမှာတရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေဆင်းခိုင်း…
သားဖြစ်သူက အမေကို တရားရုံးမှ တရားဆွဲ အမွေတောင်း ပြီး အမေကို အိမ်ပေါ်ကနေ ဆင်းခိုင်းတာ စစ်ကိုင်းမြို့ အိုးတန်းကလေးလမ်း မင်းလမ်းရပ်ကွက်မှာပါ …. မိခင် ကို ချစ်သော သား သမီး များ အားလုံး သိစေရန် ကျေးဇူးပြုပြီး Share ပေးပါဗျာ😭😭😭😭😭😭 ယခုလက်ရှိဖြစ်နေတာပါ […]
ဖောက်ပြန်တဲ့ယောင်္ကျားရဲ့လိင်အင်္ဂါကိုဖြတ်ပြီး အက်စစ်ထဲစိမ်ကာ အိမ်သာထဲ လွှင့်ပစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီး…
တရုတ်နိုင်ငံမှာ ရှိတဲ့အမျိုးသားတစ်ယောက်ကတော့ တစ်ဘ၀လုံးစာအတွက် သင်ခန်းစာတစ်ခုကောင်းကောင်းရနေလောက်ပြီလို့ ဆိုရလောက်အောင် သူ့ဘ၀မှာဘယ်တော့မှပြန်ပြင်လို့မရနိုင်လောက်မယ့် နောင်တရစရာပုံစံနဲ့ သူ့ရဲ့အပြစ်တွေကိုပေးဆပ်ခဲ့ရပါပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်တဲ့ သူ့ရဲ့ကွာရှင်းပြီးသားမိန်းမက အိမ်ထောင်ကျစဉ်တုန်းကဖောက်ပြန်ခဲ့တဲ့သူ့ကို ကောင်းကောင်းကြီးလက်စားချေလိုက်လို့ပါပဲ။ သူရဲ့အရင်မိန်းမဖြစ်တဲ့ လီလို့အမည်ရတဲ့မိန်းမဟာ သူတို့အိမ်ထောင်ကျခဲ့စဉ်တုန်းက ယောင်္ကျားဖြစ်သူဖောက်ပြန်ခဲ့တာကိုသိပြီးနောက်မှာ ဒေါသအရမ်းထွက်သွားခဲ့ပြီး ကတ်ကြေးနဲ့ယောင်္ကျားဖြစ်သူရဲ့လိင်အဂါင်္ကိုဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ သူရဲ့လိင်အဂါင်္ဟာအခုအချိန်မှာ ၀.၄ စင်တီမီတာလောက်သာကျန်ရှိနေတော့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့မိန်းမဖြစ်သူက အဲ့ဒီလိင်အင်္ဂါကိုဖြတ်တောက်နေတဲ့ အချိန်မှာလဲ […]
Facebook ​ပေါ်မှာ ခင်​တဲ့ အမျိုးသမီး​နောက်​လိုက်​ပါသွားပြီး ​ပျောက်​သွား တဲ့ ​ (၉) တန်း​ ကျောင်းသူ​ (၁၄) နှစ် ​အရွယ် မိန်းကလေး…
Facebook ​ပေါ်မှာ ခင်​တဲ့ အမျိုးသမီး​နောက်​လိုက်​ပါသွားပြီး ​ပျောက်​သွား တဲ့ (၁၄) နှစ် ​အရွယ်​ (၉) တန်း​ ကျောင်းသူ​လေး Facebook လူမှုကွန်​ယက် ​မှာ ရင်းနှီးရာ က​နေ တဆင့်​ အလုပ်​ရမည်​ ဟု ​ပြောဆို ကာ လိမ်​လည်​​ခေါ်​ဆောင်​သွား တဲ့ အတွက်​ […]
မြမြ ကို မုဒိမ်းကျင့်တဲ့ မုဒိမ်းသမား နေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ဖို့ လူ (၃) ဦး အလိုရှိ
မုဒိန်းသမားအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန် အမျိုးသားသရုပ်ဆောင်သုံးဦးအလိုရှိနေကြောင်း ဒါရိုက်တာ ညိုမင်းလွင်မှ သူ့ရဲ့ လူမှုကွန်ယက် ဖေ့ဘုတ်အကောင့်တွင် တင်ပြထားကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ ညကျောင်းရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးမှရိုက်ကူးမည့် ” မြ ” ဇာတ်ကားတွင် ရုပ်ရှင်လောကမှမည်သူမှသရုပ်မဆောင်ရဲသော မုဒိန်းသမားတရားခံသုံးဦးအဖြစ်သရုပ်ဆောင်ရန် အသက်သုံးဆယ်မှလေးဆယ်ကြားအမျိုးသားသုံးဦးရှာဖွေလျက်ရှိပါသည်၊ မုဒိန်းမှုကိုအခြေခံသောဇာတ်လမ်းဖြစ်၍ အချို့သောအပြများတွင် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုများပါဝင်နိူင်ပါသည်၊ မိမိကိုယ်မိမိယုံကြည်မှုရှိသော၊ သရုပ်ဆောင်ကိုသရုပ်ဆောင်အဖြစ်ဖြင့်သာမြင်သော ဝါသနာရှင်အမျိုးသားများအနေဖြင့် မိမိတို့၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကိုပြည့်စုံစွာဖော်ပြလျက် မျက်နှာပေါ်လွင်သောဓါတ်ပုံသုံးပုံနှင့်အတူ မြမြ […]
နှလုံးသားကို ရိုက်ခတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိပါသည်…
ယနေ့နှလုံးသားကိုရိုက်ခတ်လှုပ်ရှားစွာဖြင့် သာဓုအကြိမ်ကြိမ် ခေါ်မိပါသည် ဇူလိုင်၁၈နေ့ရပ်ကွက်ထဲကဦးမြစိုးအောင်ရဲ့ သားကြီးဆိုင်ကယ်နှင့်ကားအက်ဆီးဒင့်ဖြစ်လို့ကုတင်၁၀၀၀မှာကွယ်လွန်ကြောင်းသိရတယ် စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ နာရေးကိစ္စများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကားမောင်းသူကဖြစ်ဖြစ်ခြင်းဆေးရုံကိုပို့ ပေးမိဘတွေကိုချက်ခြင်းအျကြာင်းကြားပေးခဲ့တယ် သတိပြန်လည်မလာပဲကွယ်လွန်ခဲ့ရတယ် ကါးမောင်း သူလည်းအရေးယူခံရနိုင်တယ် ဒီနေ့ ရက်လည်ပြီးနောက်တစ်ရက်ကွယ်လွန်သူရဲ့ဖခင်ဦးမြစိုးအောင် ဖန်းဆက်လါတယ်ယါဉ်တိုက်မှုအမှုအခင်းကျေအေးစာချုပ်မှာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအနေဖြင့်အသိသက်သေအဖြစ်လက်မှတ်ထိုးပေးဖို့ ပါ ယါဉ်မောင်းမှကျေအေးပေးဖို့ ငွေကြေးအမြောက်အများထေါကါပံ့ပေးလက်မှတ်ရေးထိုးပေးဖို […]